Semalt सल्लाह Google मा उच्च स्तरमा कसरी सानो वेबसाइट प्राप्त गर्ने बारे सल्लाह
तपाइँको वेबसाइट SERP मा कसरी शीर्ष-र ranked्गको वेबसाइट बन्न सक्छ भनेर आंकडा मौलिक रूपमा प्रत्येक वेबसाइट मालिकको â „- १ लक्ष्य हो। एक युवा वेबसाइट को रूप मा, तपाईले धेरै कुरा सुन्नुहुनेछ, र मानिसहरूले तपाईलाई भन्नेछन् यो असम्भव छ। जहाँसम्म, त्यहाँ वास्तवमा कुनै कारण छैन किन एउटा युवा वेबसाइट गुगलमा उच्च रैंक गर्न सकीन्छ।
गुगल आफैंमा पृष्ठ वा वेबसाइटको उमेरलाई विचार गरीएको छैन जब यसको सर्च ईन्जिन बट्सले क्रमबद्ध क्रमबद्ध गर्दछ जुन लिंकहरू SERP मा प्रदर्शित हुन्छन्। यसको मतलब के हो हाम्रो सेवाहरूको साथमा Semalt, तपाइँ तपाइँको नयाँ वेबसाइट SERP को पहिलो पृष्ठ मा मात्र पहिलो लिंक को रूपमा हुन सक्छ।
जब SERP रैंकिंगको कुरा आउँछ, यो सबै ज्ञान र कडा मेहनतको बारेमा हो, र हामी दुवै पाउँदछौं।
के यो खोज ईन्जिनमा सानो र युवा वेबसाइटको क्रममा राख्न सम्भव छ?
हो, एउटा सानो वेबसाइटको श्रेणीकरण बिल्कुल सम्भव छ। यो काम गर्दा हामीले सामना गर्ने सबैभन्दा ठूलो समस्या सबैभन्दा राम्रो आन्तरिक लि structure्क संरचनाको कल्पना गर्नु हो। गुगल, साथ साथै अन्य धेरै खोज इञ्जिनहरूले अन्य पृष्ठहरूबाट मात्र वेबसाईट भित्रै लिंकहरू हेर्न आवश्यक छ। वेबपृष्ठलाई सानो अनुक्रमणिका प्राप्त गर्न र सानो वेबसाइटको लागि श्रेणी बनाउन, यो ध्यान धेरै भन्दा धेरै अन्य पृष्ठहरूसँग साझेदारी गर्न आवश्यक छ। साथै, जब पाठकहरू वेबसाइट भ्रमण गर्छन्, तिनीहरूले केवल एक पृष्ठ पढ्नु हुँदैन र छोड्नु हुँदैन; आन्तरिक लि using्कहरूको प्रयोग गर्नाले तपाइँको वेबसाइटमा लामो समयसम्म राख्दछ, जसले खोज इञ्जिनहरूलाई बताउँछ कि तपाइँको सामग्री रोचक छ।
सानो वेबसाइटमा यसो गर्न रणनीति चाहिन्छ। हामीले यसलाई हटाउनको लागि हामीले राम्रो योजनाको विकास गर्न आवश्यक छ।
कसरी एउटा सानो वेबसाइट खोजीमा क्रमबद्ध गर्न सकिन्छ?
शीर्षक समूह र कीवर्ड म्यापि Out
हामीले गर्ने पहिलो कुरा भनेको प्रत्येक पृष्ठको लागि कुञ्जी शब्द र शीर्षक समूहहरू नक्शा बनाउनु हो। किनकि वेबसाइट सानो छ, यो धेरै गाह्रो छैन। हामी त्यसपछि शीर्षक र कुञ्जीशब्द वर्गीकृत गर्न सक्छौं जुन हामी पृष्ठहरू देखाउन चाहान्छौं। त्यसोभए अब हामीसँग एक विस्तृत सूची छ कि एक खोजशब्द खोजीले के ल्याउनेछ र अन्य सम्बन्धित पृष्ठहरू पनि त्यो खोजीमा। यसको साथ, हामी एक प्रतिलिपि सिर्जना गर्न सक्दछौं जुन प्रयोगकर्ताहरूले उपयोगी पाउनेछन् किनभने यसले उनीहरूलाई समाधान प्रदान गर्दछ।
यस कार्यनीतिको एक उदाहरण भनेको तपाईंलाई पहिले नै FAQ र तुलना तालिकाको रूपमा थाहा छ। यी पृष्ठहरू प्राय: धेरै अन्य पृष्ठहरूमा लिंक हुन्छन् र वेबसाइटमा अन्य चीजहरू पाउनको लागि इन्टरनेट ट्राफिकको लागि हबको रूपमा सेवा गर्दछ जुन उनीहरूलाई चासो लाग्न सक्छ।
समर्थन भिडियो र चार्टहरू प्रयोग गर्दै
समर्थन भिडियोहरू, छवि चार्टहरू, र अन्य डाटा आईटमहरू थप्नाले तपाईंको साइटको प्रयोगकर्ता अनुभव बढाउन सक्छ। त्यसोभए पाठकहरू थाक्दैनन् र छोडिन्छन्, र उनीहरूले प्रतिलिपिलाई अर्थ पनि थप्छन् जब प्रासंगिक हुन्छ। हामी छविहरू, भिडियोहरू, चार्टहरू, इत्यादि पछि हामी जहिले तपाईंको साइटलाई अनुकूलन गर्छौं, जसले गर्दा तपाईंको पृष्ठ सुस्त हुँदैन। यदि केहि पनि छ भने ढिलो पृष्ठ प्रयोगकर्ताको अनुभवका लागि भयानक छ।
तपाईंको पृष्ठलाई सीएलएस शिफ्टहरू ठीक गर्न र रेन्डर गर्न सक्षम हुनबाट रोक्ने कुनै पनि चीजलाई डिफल गर्नुहोस्। यो महत्वपूर्ण छ कि पिक्सेल तपाईले जाँच गर्नुभयो।
हामी सबै छविहरू र फाईलहरू सress्कुचित गर्न सकेसम्म उत्तम गर्न सक्दछौं ताकि तपाईंको वेब पृष्ठहरू सकेसम्म चाँडो लोड हुने छ। हामी थप कोडहरू हटाउँदछौं, सहित:
प्लगइनहरू र अनुप्रयोगहरू
स्किमा लाइब्रेरीहरू थप्नाले प्रत्येक पृष्ठ र ती पृष्ठहरूमा रहेको तत्वहरूको परिभाषा गर्न मद्दत गर्दछ।
तपाईंको घर पृष्ठमा ब्याकलिlin्क निर्माण गर्नु तपाईंको ब्रान्ड मान्यता प्राप्त गर्नका लागि अर्को तरिका हो। हामी तपाईंको ब्रान्ड र वेबसाइट अधिकार निर्माण गर्दछौं तपाईंको ब्रान्ड तपाईंको पृष्ठहरूमा तपाईंको होमपेजमा लिंकको साथ उल्लेख गरेर। होमपेजबाट, हामी अब अन्य पृष्ठहरूमा ट्राफिक र अधिकार हस्तान्तरण गर्न सक्दछौं तिनीहरूलाई लिंक गरेर।
सार्वजनिक सम्बन्ध दुनिया मा तपाइँको वेबसाइट प्रदर्शन को लागी कुञ्जी हुन सक्छ। हामी PR रणनीतिहरू विकास गर्दछौं जुन तपाईंको व्यवसायसँग प्रत्यक्ष प्रासंगिक छ र यस्तो योजना जुन तपाईंको साइटलाई "उल्लेख" योग्य बनाउँदछ। हामी सस्तो, कम-गुणको उल्लेख तर शीर्ष-सल्भ वेबसाइटहरूबाट लि not्कहरू भनेका छैनौं।
एउटा उपकरण हामीले अत्यन्त उपयोगी पाएका छौं गुगल मेरो व्यापार हो। तपाईंको वेबसाइट वा व्यवसाय कती सानो छ, Google मा मेरो खाताको खाताले Google लाई आश्वासन दिन्छ कि तपाईंले आफ्नो वेबसाइट काम गर्नमा लगानी गर्नुभयो। तपाइँको GMB विवरण अपडेट राख्दा तपाइँको आगन्तुक वा खोजीकर्ताहरूलाई व्यापारमा नयाँ विकासको बारेमा जानकारी अपडेट गर्दछ। यस तरिकाले, तिनीहरूसँग जहिले पनि सहि ठेगाना, सम्पर्क जानकारी, र वेबसाइट हुन्छ।
के तपाइँ तपाइँको वेबसाइट को बढ़ती मानेको छ?
जबकि एक सानो वेबसाइट भएको ठ्याक्कै रैंक नगर्नुको कारण होईन, हामीले यो महत्त्वपूर्ण पाउँदछौं कि तपाईंले बताउनुभएका सबै गरिरहनु भएको बेला तपाईंले आफ्नो वेबसाइट बढाउनु पर्ने कुरामा ध्यान दिनुहुन्छ। साना वेबसाइटहरू सामान्यतया साना व्यवसायका साथ वर्गीकृत हुन्छन्। प्राय जसो साना वेबसाइटहरूले आफ्नो वेबसाइट विकास गर्न केहि पनि पछि खर्च गर्छन्, तर यदि तपाइँ खोजी ईन्जिनको पहिलो परिणाम पृष्ठमा देखा पर्ने योजना गर्नुहुन्छ भने, तपाइँ तपाइँको वेबसाइट मा लगानी गर्न आवश्यक छ।
तपाईंको सामग्री बढाउनुहोस्। अधिक सामग्रीको अर्थ वेबसाइट प्रयोगकर्ताहरूको लागि फीड गर्नको लागि थप जानकारी; यसको अर्थ आन्तरिक लि acquire्कहरू र तपाईंको उद्योगमा अधिक अधिकार प्राप्त गर्नका लागि अधिक कारणहरू छन्। यदि तपाइँसँग तपाइँको वेबसाइटको आकार बढाउनका लागि एक तरीका छ भने हामी सुझाव दिन्छौं कि तपाइँले यसलाई लिनुहोस्। एउटा सानो वेबसाइट भएको कुनै महत्त्वपूर्ण लाभहरू छैनन्।
यसको सट्टामा, तपाईंसँग एक ब्लग हुन सक्दछ जुन तपाईं सान्दर्भिक शीर्षकहरू र नयाँ गफहरू साझा गर्नुहुन्छ। तपाईं निर्दिष्ट सेवाहरूमा नयाँ पृष्ठहरू थप्ने विचार गर्न सक्नुहुनेछ वा नयाँ पृष्ठहरू सिर्जना गर्नुहोस् जहाँ तपाईं सामान्य प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहुन्छ।
तपाइँ तपाइँको वेबसाइट एक दिन वा वर्षमा १,००० पृष्ठमा बढ्नु हुँदैन। के कुरा महत्व राख्दछ कि त्यहाँ सधैं सधैं केहि नयाँ को लागी केहि समय छ। उपभोक्ताहरू सोच्न चाहान्छन् कि ब्राण्ड बढ्दैछ। यसको मतलब यो हो कि तपाईले बढि ग्राहकहरू पाउनको लागि सुधार गर्नुपर्दछ। यदि वेबसाइट भएकोमा तपाईंको लक्ष्य तपाईंको डिजिटल बजार बढाउने हो भने, तपाईंसँग सानो वेबसाइट हुनुको कुनै कारण छैन।
यदि वेबसाइट विस्तार गर्न सम्भव छ भने, यसको लागि जानुहोस्। तपाईंको वेबसाइट बढ्दै ग्राहक अनुभव र खोज र्याकिंग लाभहरूको एक धेरै संग आउँछ।
तपाइँको खोज इञ्जिन स्तर निर्धारण
Semalt मा हाम्रो उद्देश्य तपाईंको वेबसाइटको प्रत्येक पृष्ठ SERP मा उच्च रैंकिंग मा सबै भन्दा राम्रो मौका खडा छ भनेर सुनिश्चित गर्नु हो। यो प्राप्त गर्नका लागि हाम्रो विशेष विधि तपाइँको वेबसाइट रैंकिंगलाई सुधार गर्ने मुख्य पक्षहरूमा केन्द्रित छ। १ वा १,००० पृष्ठहरू, यो एक वेबसाइट को रैंकिंग सुधार गर्नेछ।
एक ठोस फाउन्डेशन निर्माण गर्दै
वेबपेजलाई राम्ररी रैंक गर्नको लागि, यसमा राम्रो साइट संरचना र जानकारी आर्किटेक्चर हुनु आवश्यक छ। यदि यी दुई तत्त्वहरू ठीकसँग क्यालिब्रेट गरिएको छैन भने, यसले उत्तम एसईओ प्रयासहरूलाई पनि डूम गर्न सक्दछ। तपाईंको वेबसाइट प्रयोगकर्ताहरू र खोजी ईन्जिन क्रॉलरहरू द्वारा नेभिगेट गर्न सजिलो हुनुपर्छ। वेबसाइट बनाउँदा उपयोगिता पहिले तपाईंको प्राथमिक उद्देश्य हुनुपर्छ - मोबाइल उपकरणहरूको लागि पनि अनुकूलित।
खोजी इन्जिन एल्गोरिदमहरू, विशेष गरी गुगलको, धेरै संकेतहरू समाहित गरियो र परिणाम पृष्ठमा लिंकहरूको पदानुक्रम निर्धारित गर्न मेशिन लर्निंग टेक्नोलोजी प्रयोग गर्दछ। ध्यानमा राख्दै, एसईओको आधारभूत कुराहरूमा ध्यान दिएर तपाईंलाई थुप्रै अन्य वेबसाइटहरूमा फाइदा दिनेछ।
मोबाइल उपकरणहरूको लागि अप्टिमाइज गर्नुहोस्
मोबाइल उपकरणहरू वेब ट्राफिकको प्राथमिक स्रोत बनिरहेका छन्। मोबाइल पहिलो अनुक्रमणिकाको साथ, हरेक
वेबसाइट जसले यसको स्तर सुधार गर्ने आशा गर्दछ मोबाइल ब्राउजरको आवश्यकताहरू समायोजित गर्नुपर्दछ। प्रयोगकर्ताहरूले कुनै पनि कठिनाई बिना मोबाइल उपकरणहरूमा सहज रूपमा तपाईंको साइटको साथ कुराकानी गर्न सक्षम हुनुपर्दछ। मोबाईल उपकरणहरूको लागि तपाइँको वेबसाइटलाई अनुकूलन गर्ने क्रममा, हामी यो कुरा सुनिश्चित गर्दछौं कि तपाइँको लोडिंग समय सकेसम्म छोटो छ। लोडिंग समय एक विशाल कारक हो, विशेष गरी मोबाइल प्रयोगकर्ताहरूको लागि। केवल यसले तपाईलाई ट्राफिक गुमाउनको लागि मात्र होइन, तर किनभने मोबाइल उपकरणहरूमा जडानहरू अक्सर पीसीको भन्दा ढिलो हुन्छ।
गतिको लागि अप्टिमाइज गर्नुहोस्
मोबाइल होस् वा डेस्कटप, गति महत्त्वपूर्ण छ। Semalt लगातार मॉनिटर गर्दछ र यसको ग्राहकको वेबसाइटहरूको गति सुधार गर्न को लागी कोशिश गर्दछ। हामी यो गर्न धेरै तरिकाहरू छन्, जुन हामीले यस लेखमा सूचीबद्ध गरेका छौं।
तपाईंको लिंक सुधार गर्नुहोस्
आन्तरिक र बाह्य लिंकहरूले साइटलाई कसरी वर्गीकृत गरिन्छ भन्नेमा ठूलो प्रभाव पार्दछ। यो सँधै महत्त्वपूर्ण छ कि हामीले नयाँ उच्च-गुणवत्ता र सान्दर्भिक लि acquire्कहरू प्राप्त गर्नका साथै आन्तरिक लि of्कहरूको हाम्रो नेटवर्क सुधार गर्न सक्दछौं।
खोजी ईन्जिनहरूले स्प्याम्मी वेबसाइटहरू र वेबसाइटहरू द्वारा प्रयोग गरिएका योजनाहरूको क्रमबद्ध गर्न नयाँ तरिकाहरू खोज्न जारी राख्छन् जसको मतलब कुनै पनि कालो ह्याट प्रविधिको प्रयोगले तपाईंको वेबसाइटलाई जोखिममा पार्छ। माथिको सूचि र हाम्रो मद्दतमा Semalt, तपाईं गर्न सक्नुहुनेछ र गुगल र अन्य खोजी ईन्जिनहरू द्वारा क्रमबद्ध हुनेछ। अचम्मको खबर यो हो कि तपाईको रैंकिंगले सुधार गर्न जारी राख्नेछ किनकी अधिक SEO प्रयासलाई तपाइँको वेबसाइटलाई अनुकूलन गर्ने काममा राखिएको छ।